Rafcaan waa qaadan kartaa - Skolväsendets överklagandenämnd
Go’aannadan ayaa racfaan laga qaadan karaa:
Dib u dhigid xaqqa u ardayga u leeyahay waxbarashada iyo ka joojin waxbarashadeed
Go’aannada la xiriira dib-udhigid amaba joojin xaqqa uu ardayga u leeyahay waxbarashada waxaa racfaan ka qaadan mas’uulka. (3 kap. 7 och 10 §§ skollagen).
Arday-Qaadashada dugsiyada ardayda lixaadka dhiman iyo kuwa gaarka ahba
Go’aanka arday-qaadashada dugsiyada ardayda lixaadka dhiman ama dugsiyada gaarka ah waxaa racfaan ka qaadanana mas’uulka caruurta (vårdnadshavare) (3 kap. 5 § skollagen). Sidee kale wuxuu mas’uulka racfaan ka qaadan karaa dugsiyada aan soo sheegney oo sida gaar ka loo leeyahay (9 kap. 17 § skollagen).
Dugsiyada ardayda lixaadka dhiman
Go’aannada la xiriira la socodka ardayda aanan deganeyn guriga (specialskolan) iyo in aay xaq u leeyihiin sii wadashada waxbarashadooda waxaa racfaan ka qaadanaya ardyga laftiisa ama wakiilka ardayga (7 kap. 8 § skollagen).
Go’aannada la xiriira la socodka ardayda aanan deganeyn guriga (grundskolan), oo lagu meeleeyo qaar ka mid ah dugsiyada iyadoo la tixgelinaya ammaanka ardayda kale iyo waxbarashadooda, ama kuwa la xiriira arday-qaadashada hadii ardaygu oo ka yimid degmo (kommun) kale uuna xaq u leeyahay dhamestir waxbarashadeed oo dugsiga hoose/dhexe ah, waxaa racfaan ka qaadanaya ardayga laftiisa ama qof wakiil ka ah (4 kap. 11-12 §§ skollagen).
Koox lixaadka la’ oo si gaar ah wax loo baro
Go’aannada la xiriira in koor lixaadka la’ oo si gaar ah wax loo baro waxaa racfaan ka qaadanaya ardayga laftiisa ama mas’uulka ardayga (8 kap. 1 § grundskoleförordningen).
Arday-qaadashada dugsiyada sare
Go’aanada la xiriira arday-qaadashara dugsiyada sare waxaa racfaan ka qaadanan codsadaha (5 kap. 11 och 13 d §§ skollagen).
Arday-qaadashada dugsiyada sare ee lixaadka la’
Go’aannada la xiriira arday-qaadashada dugsiyada sare ee gaarka ah waxaa racfaan ka qaadanaya ardayga laftiisa ama qof wakiil ka ah (6 kap. 8 § skollagen). Sidee kale wuxuu ardayga ama mas’uulka racfaan ka qaadan karaa dugsiyada sare ee aan soo sheegney ee sida gaar ka loo leeyahay (9 kap. 17 § skollagen).
Ogolaanshiyaha waxbarashada waafaqsan habka Rh
Go’aanada la xiriira ogolaashiyada waxbarashada waafaqsan habka Rh waxaa racfan ka qaadanaya qofka codsanaya waxbashadan (5 kap. 30 § skollagen).
Arday-qaadashara waxbarashada dadka-waaweyn ee degmada
Go’aanada la xiriira arday-qaadashada waxbarashada dadka-waaweyn, hadii ardayga laga joojiyo waxbarashada go’aankana uusan u ogolaan in ardaygu waxbarashadiisu helo, waxaan racfaan ka qaadanya srdayga (11 kap. 23 § skollagen).
Arday-qaadashada waxbarashada dadka-waaweyn ee lixaadka la’
Go’aanada la xiriira arday-qaadashada waxbarashada dadk-waaweyn ee lixaadka la’, haddii laga joojiyo ardayga waxbarasahda, iyo hadii uu hadda dalbanayaba waxaa racfaan ka qaadan kara ardayga (12 kap. 13 § skollagen).
Arday-qaadashada barashada luqadda iswiidhiska ee dadka soo galootida ah (sfi)
Go’aanada la xiriira barashada luqadda iswiidhishka ee dad soo galootida ah (sfi), hadii aay tahay in barashadii laga joojiyey iyo hadii uu hadda dalbanayaba waxaa racfaan ka qaadan kara ardayga (13 kap. 13 § skollagen).
Ma qabtaa wax su’aalo ah oo la xiriira sida racfaanka loo sameyo, na soo wac, noosoo qor ama noogu soo email garee xafiiskeena.